कम्युनिष्ट सरकारबाट अब अपेक्षा गर्ने ठाउँ सकियो - डा डिला संग्रौला - Sunaulo Nepal
# नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
# टिकटकमा प्रधानमन्त्री
कम्युनिष्ट सरकारबाट अब अपेक्षा गर्ने ठाउँ सकियो - डा डिला संग्रौला
मंगलवार, भाद्र २ २०७७
२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को दुईतिहाईको सरकार यतिबेला सर्वत्र आलोचनाको घेरामा छ । एकातिर विकास निर्माणका काम ठप्प छन भने अर्कातिर कोभिड १९ ले देश त्रास र उच्च जोखिममा जनताहरु बांँचिरहेका छन ।
कोभिड १९ का कारण हरेक क्षेत्र शिथिल छ । जनताहरु कोरोना र त्रासमा बाँचिरहेका बेला सरकारले यसको जोखिम नियन्त्रण र रोकथाम लागि गरेको कदमहरु कमजोर र उपलब्धीबिहिन बनेका छन । यस्तो महामारीको बेला सरकार आफ्नै आन्तरिक कलह र किचलोमा भूलेको छ । यसको मौका छोपेर भ्रष्टाचार गर्ने समुह त्यतिकै सलबलाईरहेका छन ।
निराश भएका जनताहरु र स्वयम् नेकपाका आफ्नै कार्यकर्ताहरु पनि सरकारको तीब्र आलोचनामा लागिपरेका छन । साथै प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको नेपाली कांँग्रेस समेत चीर निद्रामा रहेको भनेर आलोचना पनि हुन् थालेको छ । किन कांँग्रेसले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्न सकेको छैन आक्रान्त बनेका जनतालाई राहतको महसुस हुने गरी किन आवाज बुलन्द गर्न सकेको छैन ।
सरकारको कार्यशैली र प्रतिपक्षको कमजोरीको फाईदा त्यस्ता सिमीत व्यक्तिले लिइरहेका छन । जनता भने दिनदनै भोक रोग र शोकले आक्रान्त छन । यसै परिवेशमा रहेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांँग्रृसकी प्रतिनिध सभाकी सभासद डा डिला संग्रौलासंँग सरकारको कार्यशैली र प्रतिपक्षको भूमिका र कांँग्रेसको महाविधशेनको तयारी लगायत विषयमा सुनौलो नेपाल डट कमका सम्पादक महेश पौडेलले गरेको कुराकानी ।
अहिले सरकारको गतिविधि र सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिलेको दुईतिहाईको सरकार खोई कहाँ छ ? म त देख्दिन । सरकारसंँग जनताहरुको आक्रोश पनि देखिरहनु भएकै छ । सरकार आफ्नै डम्फू बजाउन व्यस्त छ । सरकार त अधिनायकवाद र निरंकुश भइसक्यो । देश कोरोना महामारीले आक्रान्त छ । सरकारको उपलब्धी त शुन्य छ । सरकार कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम गर्न पूर्ण असफल भएको प्रमाणित भईसक्यो । सरकारलाई जनताको मतलबनै छैन उत त कुर्सी जोगाउन नै व्यस्त छ । सरकारको कोभिड नियन्त्रणमा त ध्याननै छैन । जनता रोग भोग शोकले अत्तालिएको छ । सरकार न स्वास्थ्य सामाग्री आपुर्ति गर्ने योजना छ नत पिसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छ । यस्तो भयाबह अवस्थामा नत स्थानीय तह , प्रदेश , नत संघीय सरकारसाग समन्वय गर्न सकेको छ । सरकार आफ्नै ताल, बेसुरमा हिडिराखेको छ ।
सरकारको सर्वत्र आलोचना भएर विरोध भईरहेको बेला प्रतिपक्ष किन चुप लागेर बसेको छ त ?
हामी प्रतिपक्ष अहिले चुप लागेर बस्या जस्तो मात्र देखिएको हो । शुरुवाती क्षणमा हामीले सरकारको कार्यशैली र गलत प्रवृत्तिको विरोध गरेकै हो । तर यो कोरोना महामारीमा हामीले सरकारको विरोध गर्ने यस्तो बेलामा संगै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना हो । हामीले यसअघि सदन र सडकबाट विरोध गरेकै भ्रष्टाचारको विषयमा विरोध गरेको हो र स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा भएको भ्रष्टाचारको हिसाव मागेकै हो । तर सरकार अहिले हाम्रो आवाजलाई टेरपुच्छर लगाउंँदैन , वास्तै गर्दैन । उसलाई दुईतिहाइको दम्भ छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले काँग्रेसले राम्रा कामको बारेमा साथ दिएन । बिरोध गर्ने भनिरहनु भयो । हामीले सरकारले सही दिशा पकड्ला , सुधार होला भनेर हामीले सरकारलाई सहयोग गर्यौ तर यसको फाइदा उठाएर सरकार झन निरंकुश बन्दै गयो । अब महामारीको बेला झन यस्तो बेलामा हामीले न त सदनमै बिरोध गर्न सक्छौ नत सडकमा नै जान सक्छौ । जसले गर्दा प्रतिपक्ष मौन भएको जनताले सोचेको छन । अब सरकारले अब मानेन भने सत्याग्रह जानुको विकल्प छैन ।
प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको रवैया, सरकारको कार्यशैलीकाृ विरोध कसरी गर्नुहुन्छ?
कांँग्रेस पनि कोरोना बीच महाधिवेशनमा लागेको छ । सरकार आफ्ने आन्तरिक द्धन्द्ध र कलहमा अल्झिएको छ । यस्तो बेलामा भ्रष्टाचार मौलाउंँदै गएको छ । अहिले त सरकार र भ्रष्टाचार परिपुरक भइसक्यो प्रधानमन्धी शुन्यशहनशीलतको कुरा गर्नुहुन्छ व्यवहारमा त त्यो देखिदैनै । उल्टो भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने र उम्क्याउने काम गर्दै आउनु भएको छ ।
सरकारले समृद्धिको नारा खोइत? जनताका आशा भरोसा त टुट्यो नि?
स्वास्थ्य सामाग्रीमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ? समृद्धिको सपना बाड्ने यो सरकार सबै यसको एजेण्डामा फेल खाएको छ । नेकपामा सर्वसत्ताावाद र अधिनायकवाद हावी छ । आफ्नै दलको नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीबाट आजित भईसके । जनतालाई यस्तो अवस्थामा राहत र उपचार गर्नुको सट्टा कुर्चीमा लिप्त हुनेले समृद्धिको आशा गर्नु बेकार छ । लोकतान्त्रिक सरकार भन्छ तर पत्रकारको घाटीमा समेत तरबार झुण्ड्याईएको छ । जनताको आवाजलाई दबाउन सामाजिक सञ्जालमा बोल्न बन्देज लगाईएको छ । यस्तो सरकारबाट जनताले केही आशा अपेक्षा गर्ने कुनै संकेतनै छैन ।
केपी ओली त राष्ट्रवादी नेताको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ , उहाँले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सफल हुनुभयो । यसलाई कसरी हेर्नुहुनछ ?
केपी ओली खास खोक्रो राष्ट्रवादी भएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहांँले आफूलाई राष्ट्रवादीको नामर्मा देवत्करण गर्नुभएको छ । भूमि फिर्ताको बिषयमा उहांँले चाहनु भएकै थिएन । राष्ट्रीयताको सवालमा नेपाली कांँग्रेसले साथ नदिएको भए भूमि फिर्ता हुदैनथ्यो । फेरी नक्सामा मात्र भूमि फिर्ता ल्याएर हुदैन । उहांँ छिमेकी राष्ट्रलाई चिढ्याउन धर्मको अफवाह फैल्याउने, कहिले चाइनाको राजदुत घरघर भेट्दै हिड्ने अनि द्धन्द्ध ननिम्ते के निम्तिन्छ ? नेपाली कांँग्रस राष्ट्रियता , स्वाधीनताको स्वालमा पक्षमा कांँध थाप्छ भ्रष्टाचारको बिषयमा कांँध थाप्न त सक्दैनौ नि ।
प्रसंग बदलौं, नेपाली कांँग्रेस अहिले महाधिवेशनको संघारमा छ । तयारीमा छ ? विधानको विषय तपाईको तयारी कस्तो छ?
स्थिति चाहिंँ अप्ठ्यारो छ ।नेपाली कांँग्रेसको विधानमा ६ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विभाग गठन गर्ने भन्दा भन्दै मेरो कार्याकाल सकियो भन्नुहुन्छ शेरबहादुर दाइ । अर्कोकुरा विधान मिचेर विभाग गठन गर्नुभयो भन्नुहुनछ रामचन्द्र दाई । यसरी हेर्दा दुबैको कुरा ठीक हो जस्तो लाग्छ । तर विभाग गठन नहुंँदा कार्यकर्ताले काम गर्न पाएनन नी । समयमै गठन गर्न सकेको भए सबैले काम पाउंँथेनि । कार्यकर्ताले भूमिका पाएको भए कांँग्रेस बलियो हुन्थ्यो । देश बलियो हुन्थ्यो जनता बलियो हुन्थ्यो नि ।
तपाईको महाधिवेशनको तयारी के छ ? तपाई के एजेण्डा लिएर आउंँदै हुनुहुन्छ ?
यत्रो बर्ष कांँग्रेसको राजनीति गरेको व्यक्ति म । यसपटकको महाधिवेशनमा केही एजेण्डा लिएर कार्यकर्ता माझ जादैछु । जनताको माझ जादैछु । जहिलेपनि महाधिवेनमा पदको लागि भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति छ । तर यो समयमा देशमा थुप्रै समस्या छन । अहिले सामाजिक ,आर्थिक मुद्धा छ नि । तहसमहस भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने अबको पांँच बर्षमा कस्तो कांँग्रेस बनाउने, कांँग्रेसलाई पुरानै अबस्थामा कसरी पुरयाउने भन्ने बिषयमा केन्द्रीत हुनुपर्ने छ । मेरा यी र यस्तै एजेण्डा छन । साथी भाइको माझ समर्थन बटुल्ने अभ्यास चलाइयो भने सार्थक हुन्छ आफू व्यक्ति प्रति हाबी भयाभने त्यसको अर्थ हुदैन । । अबको कांँग्रेस कस्तो बनाउने किताब लेख्दैछु त्यही लिएर महाधिवेशनमा जादैछु ।
हेर्नुहोस पुरा भिडियो सहित
# डा डिला संग्रौला
# नेपाली कांँग्रृस
मंगलवार, भाद्र २ २०७७ || ०१:५६:४०
२० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्नेगरी कोरोना खोप ल्याइने
ओली कुशासनको धमिलो पानीमा माछा मार्न राजावादी हौसिए- डा. भट्टराई
सुरु भयो नेकपा सचिवालय बैठक, ओली पनि उपस्थित
सिंहदरवारको छेवैमा घन्कियो "राजा आउ देश बचाउ"को नारा
सचिवालय बैठकअघि ओली प्रचण्डबीच वान टु वान वार्ता
राजाबादीको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै माईतिघरमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति (तस्बिर)